Umkhiqizi kanye Umhlinzeki wePlastiki owedlule I-Mestech
Ukuqothuka kwepulasitikiinqubo ekhethekile yokubumba umjovo, esetshenziselwa ukuhlanganisa izingxenye zezinto ezimbili zibe yingxenye eyodwa ngomjovo wokubumba. Izingxenye zombili zibunjwe kabili kwizikhunta ezahlukahlukene nemishini yokubumba umjovo.
Ipulasitiki ngaphezulu kokubumba inqubo yokubeka ingxenye eyodwa noma ngaphezulu ezikhona zepulasitiki yento ehlukile kufekthri yomjovo ngaphambi kokujova, bese ujola ipulasitiki kukhunta, ikhava yezinto ezijojoweyo noma ugoqe izingxenye ezifakwe kusengaphambili ukwakha ingxenye eyodwa.
Isinyathelo sokuqala: lungiselela ingxenye ebekwe ngaphambili. (Isikhunta1)
Isinyathelo sesibili: beka okubekwe ngaphambili ku-injection mold, bese wenza okweqile nge-resin epulasitiki. (Mold2)
Ingxenye yokugcina epulasitiki
Kunezinhlobo ezimbili zokubumba okungaphezulu
Thayipha 1: Izingxenye / izingxenye ezibekiwe ngaphambili zingamapulasitiki, abekade enziwe kwesinye isikhunta. Le ndlela ingeyokubumba komjovo wezinhlamvu ezimbili. Lokhu kupulasitiki ngaphezu kokubumba esixoxe ngakho lapha.
Thayipha 2: Izingxenye ezifakwe kusengaphambili aziyona ipulasitiki, kepha zingaba yinsimbi noma ezinye izingxenye eziqinile (isb. Izinto zikagesi). Lokhu sikubiza ngokuthi inqubo yokubumba.
Ngokuvamile izingxenye ezifakwe kusengaphambili zimbozwa ngokwengxenye noma ngokuphelele ngezinto zokwakha ezalandela (izinto zepulasitiki) enqubeni yokubumba ngaphezulu.
Uyazi ukusetshenziswa plastic phezu udini?
Kunezinhloso eziningi zepulasitiki ngaphezulu kokubumba. Okuvame kakhulu phakathi kwabo yilokhu okulandelayo:
1. Faka umbala ukuhlobisa ukubukeka (umthelela wobuhle).
2. Nikeza indawo elula yokubamba ohlangothini.
3. Ukungeza indawo eguquguqukayo ezingxenyeni eziqinile ukukhulisa ukuqina nokuthinta umuzwa.
4. Faka impahla enwebekayo ukumboza umkhiqizo noma uphawu lokuqinisekisa ubufakazi bamanzi.
5. Gcina isikhathi somhlangano. Asikho isidingo sokuxhuma ingxenye yensimbi nengxenye yepulasitiki ngesandla noma ngokuzenzakalela. Udinga nje ukufaka ingxenye yehardware kwisikhunta bese ujova ingxenye yepulasitiki. Akunasidingo sokuyihlanganisa nhlobo.
5. Lungisa ingxenye eyodwa ngaphakathi kwenye ngaphandle kokusebenzisa izihlanganisi noma izinto zokunamathisela.
Hlobo luni lwemikhiqizo epulasitiki ngaphezulu kokubumba okulungele?
Inqubo yokubumba epulasitiki ngokweqile ilungele imikhiqizo eminingi, ehlukahluka ngokuya ngezimo ezithile zemikhiqizo. Imvamisa kufaka amabhulashi wamazinyo, izibambo zamathuluzi (njengama-drill angenazintambo kanye nezikulufo) nemikhiqizo yokunakekelwa komuntu siqu (njengamabhodlela e-shampoo kanye ne-shavers), ama-terminals we-wire, ama-plugs, ama-SIM holders, njll.
I-PC ne-TPU igxilisa ikesi elingangeni manzi
I-PC ne-TPU igxilisa umnyango webhethri ongangeni manzi
I-PC ne-PC / i-ABS ekweqa icala lepulasitiki lomkhiqizo we-elekthronikhi
I-PC ne-TPU yeqa icala lokuvikela leselula
Umbala omkhulu usayizi omkhulu wokweqa ingxenye yepulasitiki
I-ABS & TPE isondo lokuqothula
Nazi ezinye izibonelo ezijwayelekile zokusebenzisa okungaphezulu kokubumba:
1. Ipulasitiki elimboze ipulasitiki - okokuqala, ingxenye eyindilinga eyakhiwe ngaphambi kwepulasitiki iyakhiwa. Bese kuthi enye ipulasitiki elukhuni ijojelwe noma izungeze izingxenye ezisengaphambili. Ama-plastiki angahluka ngombala kanye / noma nge-resin.
2. Ipulasitiki elukhuni eligoqwe ngothayela we-elastomer othambile - okokuqala, izingxenye zepulasitiki eziqinile zifakwa ngaphambili. I-resin ye-elastomer (i-TPU, i-TPE, i-TPR) bese ibunjelwa ezingxenyeni ezisengaphambili. Lokhu kuvame ukusetshenziselwa ukuhlinzeka indawo ethambile ebanjwe ngesandla ngezingxenye eziqinile.
3. Insimbi esongwe ngeplastiki - okokuqala nje, isisekelo sensimbi senziwe ngomshini, sijikijelwe noma simiswe. Ngemuva kwalokho, izingxenye ezifakwe kusengaphambili zifakwa emgodini wesikhunta somjovo, kuthi ipulasitiki ibunjwe ngaphakathi noma ezungeze insimbi. Lokhu kuvame ukusetshenziselwa ukuthatha izingxenye zensimbi ezingxenyeni zepulasitiki.
I-4.Elastomer resin ehlanganisa i-Metal - Okokuqala, ingxenye yensimbi yenziwa ngomshini, iphonswe noma yakhiwa. Izingxenye zensimbi ezibekwe ngaphambilini zifakwa kufoloma lomjovo bese kuthi i-resin ye-elastomer ijojowe noma ezungeze insimbi. Lokhu kuvame ukusetshenziselwa ukunikeza indawo ethambile, ebanjwe kahle.
5.I-soft elastomer resin esonga i-PCBA noma izinto ze-elekthronikhi, imodyuli ekhipha ukukhanya, njll
Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi kunemikhawulo ethile kanye nezinkinga zokuhambisana phakathi kwempahla ehlukene edinga ukubhekelwa ukwedlula ngokweqile. Awukhawulelwe ezinhlotsheni ezimbili zezinto zokwakha. Sibonile eminye imikhiqizo, ngokwengxenye enezindawo ezintathu ezahlukahlukene zepulasitiki ezihlanganisiwe ukufezekisa indawo ehlanganiswe ngemibala eminingi. Nasi isibonelo esilula somkhiqizo ozojwayeleka kakhulu kuwo: isikele.
Imvamisa, izinto zangaphambi kokubeka okuyingxenye noma izingxenye zifakwa kusikhunta somjovo, ngaleso sikhathi izinhlaka zepulasitiki ezigcwala kakhulu zifakwa ngaphakathi noma ezungeze izingxenye ezibekwe ngaphambili. Lapho okokufaka okuhlanganisiwe komjovo kupholile futhi kwelashwa, izinto ezimbili ziyahlanganiswa zenze ingxenye ebalulekile. Amathiphu angeziwe: Imvamisa kuwumqondo omuhle ukuthi izingxenye zakho ezimiswe ngaphambilini nezinto zokugoqa zibambeke ngomshini. Ngale ndlela, lezi zinto ezimbili zingahlanganiswa hhayi amakhemikhali kuphela, kepha futhi nasemzimbeni.
Yini inzuzo yokusetshenziswa ekubumbeni ekukhiqizeni?
Isikhunta sokubumba ngaphezulu sinesakhiwo esilula nenqubo eguquguqukayo.
1. Kusebenza ezingxenyeni ezinezingxenye ezinkulu zokumboza, ikakhulukazi izingxenye ezine-buckle eguquliwe. Lolu hlobo lwezingxenye zepulasitiki kunzima ukujova emshinini ofanayo wokujova umjovo onemibala emibili, ongatholwa ngepulasitiki embozwe ngomjovo.
2. Lapho ukwakheka kokusetha kwepulasitiki kulula futhi nosayizi omncane kakhulu, futhi ingxenye yokugcina inosayizi omkhulu, kufanelekile ukwamukela
plastic embozwe umjovo udini. Ngalesi sikhathi, isikhunta sesikhunta esethiwe esenziwe ngaphambilini singenziwa isikhunta esincane kakhulu noma esiningi, esinganciphisa kakhulu izindleko zesikhunta.
3. Lapho izingxenye ezifakwe kusengaphambili nezinto ezihlanganisiwe konke kungamaplastiki (izinhlaka), kuphakanyiswa ukuthi inqubo yokubumba umjovo ophindwe kabili kumele isetshenziswe ekukhiqizeni ngobuningi esikhundleni sokugudluza ukuze kutholakale ikhwalithi ephezulu, ukukhiqiza okuphezulu kanye nezindleko eziphansi. Lapho ukukhiqizwa kweqoqwana elincane noma izidingo zekhwalithi zingaphakeme, ukwanda ngokweqile kungasetshenziselwa ukugwema ukutshalwa kwemali komshini wokubumba umjovo ophindwe kabili kanye nezindleko eziphezulu zokukhiqiza isikhunta.
Yiziphi izinto zokwakha ezenziwe izingxenye ezenziwe ngaphambilini?
Sibiza izingxenye ezafakwa kuqala kusikhunta izingxenye ezibekwe ngaphambili (noma izingxenye ezibekwe kuqala).
Izingxenye ezibekwe kusengaphambili zingaba noma yiziphi izingxenye eziqinile, ingxenye yensimbi eyenziwe ngomshini, ingxenye ebunjiwe yepulasitiki, noma umkhiqizo okade ukhona, njenge-nut, isikulufa, noma isixhumi se-elekthronikhi. Lezi zingxenye ezibekiwe zizohlanganiswa nama-plastiki ajovwe kamuva ukwakha ingxenye eyodwa ngokwenza kwamakhemikhali nokuxhumeka kwemishini. Izinhlaka ze-elastomer (i-TPU, i-TPE, i-TPR) nazo zingamaplastiki, kodwa azifanele ukuba yizingxenye ezibekwe kuqala.
Ungayikhetha kanjani inhlaka yepulasitiki ngaphezulu kokubumba?
Izinhlaka zepulasitiki ezisetshenziswe ngaphezu kokubumba ngokuvamile zingamaplastiki. Ziqala zibe yizinhlayiya, futhi izinga lokushisa kwazo elincibilikayo ngokuvamile liphansi kunalezo zezingxenye ezibekwe kusengaphambili ukuvimbela izingxenye ezibekwe ngaphambili ukuthi zingalimali ukushisa okuphezulu. Lezi zinhlayiya zixutshwe nezithasiselo ezinjengama-colorants, ama-foam foam nezinye izinto ezigcwaliswayo. Ngemuva kwalokho kufudunyezwa kuze kufike lapho kuncibilika khona bese kujovwa esikhunjeni njengoketshezi. Kukhona ukulinganiselwa okuthile ezintweni ezifanele ukwedlula ukubunjwa. Uma izingxenye ezifakwe kusengaphambili ziyizingxenye zensimbi, ungasebenzisa noma iyiphi ipulasitiki njengokwengeza ngokweqile. Izinkinga zokuhambisana zingaba khona uma ingxenye ebekwe ngaphambili yenziwe ngenye i-resin epulasitiki (irabha noma i-TPE) enendawo encibilika kakhulu.
Uyazi umshini umjovo udini for phezu udini?
Umshini umjovo udini esetshenziswa plastic phezu-udini kuyinto ezivamile umjovo udini umshini, okuyinto ihlukaniswe yaba izinhlobo ezimbili: mpo futhi enezingqimba.
1. Umshini wokufaka umjovo omile uhlala isikhala esiningi kunomshini wokufaka umjovo ovundlile we-tonnage efanayo, okungelula ukuwunakekela, ngakho-ke ithani livame ukuba lincane. Ikakhulukazi efanelekayo izingxenye ezincane zosayizi noma izingxenye ezibekwe kusengaphambili akulula ukuthi zilungiswe ekubunjweni.
2. Umshini wokufaka umjovo ovundlile unamathani amakhulu nendawo encane yokuhlala, efanelekile ekubumbeni izingxenye ezinkulu zosayizi.
Indlela ukukhetha umjovo udini umshini ngoba phezu udini?
1. Kuqondile umjovo wokubumba umshini uvamise ukusetshenziselwa izingxenye ezincane njengamatheminali kocingo nezixhumi, ama-plugs kagesi, amalensi njalonjalo. Izikhunta zilula futhi zisebenza kahle.
2. Umshini wokubumba umjovo ovundlile usetshenziselwa izingxenye ezinkulu zosayizi, ezinamandla anele futhi ezenzelwe ukusebenza.
3. Kunconywa ukubunjwa kwemijovo emibili ngezingxenye ezibekwe kusengaphambili nezinto ezihlanganisiwe, ezingafinyelela ikhwalithi engcono nokukhiqiza kunokufaka umjovo obekiwe.
Izikhunta zomjovo wokubumba ngaphezulu
Ukweqa ngokweqile kuvamise ukuba namaqoqo amabili omjovo womjovo. Enye eyokubumba ingxenye ebekwe ngaphambili, enye eyengxenye yokugcina yokugcina ebunjiwe ngokweqile.
Lapho izingxenye ezibekwe ngaphambilini kungezona ezepulasitiki noma zingenasidingo sokubumba umjovo, kudingeka iqoqo elilodwa kuphela lesikhunta esikhulu. Lokhu sikubiza ngokuthi inqubo yokubumba.
Inkampani yakwaMestech inesipiliyoni ekubunjweni ngomjovo oplastikini, ikakhulukazi ekubunjweni komjovo oplastikhi okugqokiwe kwamagobolondo emikhiqizo ehlukahlukene kagesi neyegesi enehadiwe njengezingxenye ezisethwe ngaphambilini. IMestech ibuye ifakwe imishini yokubumba yenaliti enemibala emibili, ekhiqiza izinhlobo ezahlukahlukene zezingxenye zepulasitiki ezinemibala emibili, izingxenye ezifakwe ngepulasitiki zesikhunta nokubunjwa komjovo. Uma uyidinga, sicela uxhumane nathi.
Langaphambilini Amathiphu wezakhiwo zepulasitiki eziqondile nokuklanywa
Olandelayo: Ukuhlobisa okungaphakathi kwesikhunta-IML